Dhageyso+Akhriso Idaacada Andalus Oo Baahisay Jadwal Ku Saabsan Ramadaanka. – Bogga Calamada.com
Dhageyso+Akhriso Idaacada Andalus Oo Baahisay Jadwal Ku Saabsan Ramadaanka.
Bismillaah Ugu Horeyntii Idaacada Islaamiga ah ee Andalus waxey leeyahay dhageystaasheeda iyo guud ahaan Umadda Muslimiinta Ramadan Mubarak, waxaan Allaah ka baryeynaa inuu na waafajiyo kheyrka iyo fadliga weyn ee ku jira bishan.
Marka xigta waa sidaad sheegtay oo Idaacadda Islaamiga Andalus waxay isku shaandheyn ku sameysay jadwalka shaqo ee Idaacadda, waxayna soo kordhisay duruus, iyo barnaamijyo aan isdhihi karno dhageystayaashu wax weyn ayey ka faa’idi doonaan inta lagu gudajiro bisha barakeysan ee Ramadan.
Sidoo kale waxaa hakad la geliyay qaar ka mid ah duruustii ka bixi jirtay Idaacadda sababo ku aadan duruusta iyo xalaqaatka cusub ee aan ugu talagalnay Ramadan oo buuxiyay jadwalka.
Balse wararka iyo barnaamijyadii joogtada ahaa ee Idaacadda sidoodii ayey iyagu ahaan doonaa, hase yeeshee waxaa lagu soo kordhin doonaa qaybo cusub.
Barnaamijka Faafreebka oo kale waxaa lagu soo kordhin doonaa daris kooban oo ah kitaabka Waaxaat Jihaadiyah ee uu qoray Sheykh Ibraahiim Ar-Rubeysh, Allaha aqbalee Darsigaas waxaa jeedin doona Sheykh Mahad Warsame (Abuu Cabdi Raxmaan) darsigaas waa mid si gaar ah u khuseeya Mujaahidiinta oo daaweynaya aafooyinka iyo cudurada inta badan looga baqo jihaadka iyo Mujaahidiinta sidaas darteed Mujaahidiinta waxaan si gaar ah ugu boorinaynaa in ay ku xirnaadaan darsigaas, kana faaiideystaan.
Darsiga Isagoo ku celis ahna waxaa lagu soo qaadan doonaa warka subaxnimo ee Idaacadda Insha Allaah.
Barnaamijka Caalamul-Yowm isaguna wuxuu ahaan doonaa sidiisii hore balse waxaan isna lagu soo gudbin doonaa darsi kooban oo ah Kitaabka la yiraahdo “Mukhtasar Siyaasatul Xuruub” Kitaabkan waxaa akhrin doona Sheykh Qaasim Ar-Riimi (Abuu Hureyra As-Sancaani) oo ah amiirka Mujaahidiinta Al-Qaacida ee Jaziirada Carabta.
Kitaabkan waa kitaabka ka hadlaya xeeladaha dagaalka, talaabooyinka looga baahan yahay qaa’idka meydaaniga ka hor inta uusan dagaal gelin ciidanka iyo waxa looga baahan yahay ciidanka intaba, waana darsi si gaar ah u khuseeya Mujaahidiinta guud ahaan gaar ahaan ciidamada iyo saraakiisha ciidanka.
Waxaa barnaamijyada noo bixi doona bisha Ramadan ka mid ah Barnaamij la yiraahdo taariikhda Islaamka oo ah barnaamij ka faalloon doona loolanadii dhexmaray Muslimiinta bariga Africa iyo xabashida saliibiyiinta ah gaar ahaan Jihaadkii uu Al-Imaam Axmad Gurey la galay xabashida Itoobiya.
Barnaamijkan waxaa ku lamaanan oo marka uu dhamaado inoo xigi doona warbixino Taxane ah oo la yiraahdo “Dhulalka La Boobay ee Muslimiinta” oo aan kaga warami doono dhulalka Muslimiinta ee ku hoosjira gumeysiga gaalada gaar ahaan dhulalka la qabsaday ee ay gaaladu sheegtaan in ay iyagu leeyihiin sida NFD iyo Somali-Galbeed iyo dhulalka ee la midka ah ee ku yaalla caalamka Islaamka.
Dhanka duruusta hadaan eegno waxay Idaacadu soo kordhisay duruus cusub sida:
Duruus Ramadaaniyah oo uu soo jeedin doono Sheykh Xayyaakallaah.
Suwar min Xayaati taabiciin oo uu soo jeedin doono Sheykh Cabdil illaah.
Min Akhlaaqi Salaf oo uu soo jeedin doono Sheykh Jaamac Aadam.
Az-Zuhdu wa raqaa’iq oo uu soo jeedin doono Sheykh Cali Katiin.
Duruustan iyo barnaamijyadan waxay ka wada bixi doonaan dhamaan xarumaha Idaaacadda Islaamiga Andalus, Jadwal ahaan duruusta waa lagu kala duwanaan doonaa iyadoo idaacad waliba ay eegeyso bulshada ay ka hadleyso laakiin barnaamijyada kale ee sida barnaamijka Taariikhda Islaamka iyo xalaqaatka kale wakhti isku mid ah ayey ka wada bixi doonaan Insha’allaah.
Waxaan Allaah weydiisaneynaa inuu nawaafajiyo khayrka noocyadiisa kala duwan, nagana dhigo kuwa ka faa’ideysta duruusta iyo barnaamijyada qiimaha badan ee ka bixi doona Idaacadda, Cid waliba oo ka qeyb-qaadatay fudueynta hgowshana uu miizaanka xasanaatka u saaro.
Ugu dambeyntii bahda Idaacada Islaamiga ah ee Andalus waxay dhamaan ugu hambalyeyneysaa ummada Islaamka guud ahaan, gaar ahaan ummada Soomaaliyeed, curashada bisha barakaysan ee Ramadaan. Si gaar ah waxaan u xuseynaa walaalaha Mujaahidiinta ah ee ku jira furimaha laga difaacayo Islaamka iyo ehelkiisa, raga halyeeyada ah ee dhiigooda u huray in Shareecada Islaamka lagu dhaqo dhulka, dadka Muslimiinta ahna ay nabad iyo xasillooni ku joogaan guryohooda, raggaas iyaga ah oo iskugu jira qaybo kala duwan oo aanan tiro ahaan halkan lagu soo koobi Karin, waxaan Leenahay Ramadaan Mubaarak. Ilaahay camalkiina ha aqbalo, dadaalkiinana miizaanka xasanaatka ha idiin saaro.
Halkan Ka Dhageyso Wargalinta Idaacada Andalus Ee Jadwalka Ramadaanka.
Allaahu Akbar masha allaah. waa war farxad leh allaaha barkeeyo walaalihii u istaagay howshaan. dhamaan cidacada islamiga Andalus iyo Webseydka Calamada.com waxaan leyahay RAMADAN MUBARAK. sidookale waxaan Webseydka Calamada.com ka codsan laheyn inay noo soo gudbiyaan duruustaan ay balance qaaday cidaacada andalus e ka bixidoono inta lagu guda jiro bisha barakeesan ee Ramadaan si aan uga faa idaysano maadaama aanan joogin wilaayaadka islamist ah oo aan ka foknahay xaromaha cidaacada islaamiga Andalus. Waxaana allaah ka bar yeynaa inuu na waa fajiyo khayka basha barakeesan ee Ramadaan sudoo kale waxaan allaah ka bar yeynaa inu mujaahidiinta guuleeyo oo gaaladana jabiyo insha allaah.